Fahadisoam-panatenana misesisesy | Hevitra MPANOHARIANA
2010-06-12 @ 09:24 in Andavanandro
Miditra eo amin'ny fetiben'ny baolina fandaka ny eran'izao tontolo izao nanomboka androany 10 jona 2010. Hiara-hianoka izany avokoa ny rehetra, eo ambodin'ny fahitalavitra indray no handanian'ny ankamaroan'ny lehilahy ny fotoanany mandritra ny iray volana. Raha mandritra ny andro voalohany isian'ny lalao no mahazatra ny olona hahitana ireo lanonam-panokafana sy ny fihetsiketsehana isan-karazany dia androany (alakamisy) kosa no hanombohana izany fety isan-karazany izany ao Afrika Atsimo ao, rahampitso (zoma) anefa no hanombohan'ny lalao fanokafana.
Marihina fa iniako soratana ny andro satria alina fanindroany misesy aho izao no tsy mahazo serasera mihitsy na ny bitika aza. Nanandrana nandefa ny solosaina indray aho tamin'ny atoandro ka nanandrana ny aterineto fa dia nandeha soa aman-tsara ilay izy. Ny atoandro anefa ny tena dia miasa any amin'ny orinasa ka tsy mampiasa loatra ny serasera ato an-trano. Nohararaotina ny namoahana ilay lahatsoratra nitaterako ny dia iray volana lasa izay. Ny alina no tena ilàna ny serasera saingy tsy misy na inona na inona azoko atao amin'izao fotoana anoratana izao. Noho izany, tsy afa-mitsara izay lahatsoratra tokony hivoaka ao amin'ny Global Voices Online aho ary tsy afa-manaraka ihany koa izay vaovao hafa tiana hovakiana hatraty an-trano. Fahasorenana tsy misy tahaka izany aloha fa dia toy ny hoe kamo angamba ny hiheveran'ny namana ahy rehefa tsy tafavoaka ny lahatsoratra tokony hivoaka na tokony handika lahatsoratra ho amin'ny teny malagasy ihany koa ny tena.
Hafahafa ihany ry zareo raha tsy afa-miserasera aho ny alina fa ny atoandro izay iseranako fotsiny indray no mandeha soa aman-tsara ilay aterineto. Resy lahatra tanteraka aho fa tsy avy aty amiko kosa angamba ny olana fa any amin'ny orinasa mpanolotra ny fahafahanay miserasera. Izaho kosa anefa tsy handeha ho any amin'ny cybercafe velively satria andoavam-bola ihany koa ity serasera an-trano ity ka efa voatokana ny vola hiseraserana. Tezitra aoka izany ny tena ka niantso ny laharan'ny sofin-davitra nomena hikarakara anay mpampiasa aterineto. Lany fotsiny ny telo minitra sy sasany amin'ilay feonkira famantarana azy iny vao nisy niteny fa mbola sahirana avokoa hoe ny mpiasa ka afaka kelikely indray miantso. Dikan'izany tsy izaho irery ihany no manana olana na tsy miraharaha mihitsy izay miasa alina ao amin'io orinasa io fa mety misy zavatra tiany atao ka ny aty aminay aty no analany vonkina tsy avelany miserasera. Na nahazo baiko mihitsy ity orinasa mpanolotra serasera ity hanakana ny fahafahan'ny olona rehetra mampiasa ny tolotra ataony ao anatin'ny andro (alina no marina kokoa) vitsivitsy. Ilay namana an-tserasera anankiray izay tsy mpitovy hevitra politika amiko matetika moa dia efa nanoratra tany amin'izy ireo mihitsy ka asa na efa nahazo fahafaham-po izay na tsia fa ny ahy dia izao mamoaka lahatsoratra izao no ataoko.
Saiky tsy hiraharaha loatra aho satria efa nametraka fotoana hijerena fahitalavitra hanaraka izany lanonam-panokafana mondial 2010 izany. Nandrasana ny tamin'ny tamin'ny enina ora hariva (18 ora) GMT na ny tamin'ny sivy ora alina (21 ora) eto Madagasikara mba handefa izany ny TVM kanjo moa ny fandraisan'ny filohan'ny FAT ireo Ambasadaoro no nataon'ny TVM ho rehareha tao... mbola vaovao an-tsary ihany hay. Hatezerana ny ahy nahita izany nefa faly indray aho fa tsy ho izaho irery no ho tezitra fa hiara-tezitra amiko avokoa ireo mpahara-baovao eto an-toerana ka mahalala io fotoana io na mpanohana izy na mpanohitra ny fitondrana. Dia notohizako ny eritreritro hoe tokony hataon'izy ireo tahaka izao hatrany isaky ny misy baolina ireny ka rehefa tapitra mihitsy ny vaovao an-tsary vao alefa ilay mivantana avy any Afrika Atsimo. Enga anie tsy ho sahy hanao izany ry zalahy ireto fa raha sahy... tsy haka lagy kosa angamba ny mpankafy fa mba manofa any amin'ireny mpampita azy ireny na mividy ireny tandrom-pandraisana (antenne) sahafabe mitentina 400 000 ariary ireny dia mahazo fahitalavitra an-jatony hojerena.
Fa dia inona loatra no anton'izao tahotra izao e? Tombatombana ihany no havoaka eto fa nisy ny gazety malagasy iray nanamarika fa nahazo fanasana hanatrika ny lanonam-panokafana ny filoha Ravalomanana Marc, koa ahiana dia ahiana ny hahitana azy mivantana amin'ny fahitalavitra ka aleo tsy alefa mihitsy ilay fandaharana fa mahadikidiky amin'ny olona. Dia faniriana miafina ao amiko indray ny hoe aleo hanatrika ny ankamaroan'ny lalao rehetra mihitsy ilay rangahy io dia ilay baolina mihitsy no tsy alefa. Ireny any amin'ny famaranana ireny indrindra no tena hanaovana izany fa dia asa fotsiny ny fanapatapahana ny mivantana dia mody lazaina avy eo fa tsy tonga teto Madagasikara ny sary avy any amin'ny zanabolana. Na izany na tsy izany aloha ny zava-misy dia sady tsy mahazo aterineto mihitsy aho no tsy hisy olona handray ahy hikarakara ny fahavoazako izao alina izao nefa mety handeha soa aman-tsara indray izy ny atoandro fa dia lasa lavitra ny fanahiana fandrao tena ny fahafahako miserasera mihitsy no sakanana tsy hahafahako mamoaka izay kasaiko ho hitan'ny besinimaro.
Jentilisa, Antananarivo 10 jona 2010 tamin'ny 22:44
Fanamarihana faramparany: Androany sabotsy maraina indray aho vao nahazo fiseraserana indray. Enga anie mba tsy ho marina ny ahiahiko hoe nosakanana amin'ny fmba ankolaka aho fa mba ho nisy fahavoazana tokoa nyhosinamitondra izany serasera izany ka izao vao tafaverina amin'ny laoniny izany serasera izany. Hatramin'ny alarobia mankamin'ny sabotsy izany dia tsy afa-niserasera loatra aho.
Ny fanalan-jaza : aza mba tratran’ny fihatsaram-belatsihy sy voafitaky ny henatra
Lalàna nolanian'iza? Nampiana fanitsiana avy amin'ny MSK
Resy tsy miady! mandra-pivoaka izay mety ho fanitsiana!
Tsy ho mora mihitsy ny handresy an-dRajoelina
Mahay ny mpitondra, fa tsy amin'izay eritreretinao